उनीहरुको उक्त प्रकारको निर्णय र कारवाहीलाई ने.क.पा. (मसाल)ले अत्यन्त गम्भीर रुपमा लिन्छ । प्रजातान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत कुनै पनि राजनीतिक दललाई चुनावमा अधिकतम सफलता प्राप्त गर्नका लागि प्रयत्न गर्ने अधिकार हुन्छ । तर त्यसका साथै उनीहरुमा पराजयलाई पनि स्वीकार गर्ने स्पिरिट हुनु पर्दछ । यो संसारभरमा प्रचलित प्रचलन हो । त्यो कुरा पूँजीवादी गणतन्त्रका सन्दर्भमा मात्र सत्य होइन । एउटा माक्र्सवादी�लेनिनवादी पार्टीको जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तले पनि त्यो कुरामा जोड दिन्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीको कुनै पार्टी सदस्यलाई आफ्नो भिन्नमत प्रकट गर्ने वा त्यसमा जोड दिने अधिकार हुन्छ । तर त्यसका साथै त्यसले बहुमतको निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । त्यो संगठनात्मक सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरियो भने पार्टीमा नोकरशाहीवाद, अराजकतावादी स्थितिको सिर्जना हुन्छ । पार्टीमा त्यस प्रकारको जनवादी केन्द्रीयताको स्पिरिट नभएका पार्टी सदस्यहरुमा वा नेतृत्वमा पनि नोकरशाही वा अराजकतावादी प्रवृत्तिहरु प्रायशः देखापर्ने गर्दछन् । त्यसको परिणाम स्वरुप कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनात्मक प्रणाली प्रायशः ध्वस्त हुने गर्दछ र विश्व तथा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि त्यस प्रकारका कैयौं उदाहरणहरु पाइन्छन् । त्यही कुरा प्रकारान्तरले पूँजीवादी प्रजातन्त्रका सन्दर्भमा पनि सत्य हो । त्यसअनुसार पूँजीवादी प्रजातन्त्र अन्तर्गत हुने चुनावमा आफ्नो विजयका लागि अधिकतम प्रयत्न गर्नुका साथै पराजयलाई स्वीकार गर्ने स्पिरिट पनि हुनुपर्दछ ।
अहिलेसम्मको संविधानसभाको मतगणनाले एमाओवादी तेस्रो शक्तिका रुपमा र धेरै तल्लो तहमा पराजित हुँदै गइरहेको कुरा झन्पछि झन् प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ । वास्तवमा त्यस प्रकारको परिणाम त्यसले अपनाएका गलत नीति र कारवाहीहरुको परिणाम हो भन्ने कुरा त्यसले बुझ्नु पर्दछ । अर्को शब्दमा त्यसको त्यो पराजयले नेपाली जनताको सही जनमतलाई अभिव्यक्त गर्दछ । त्यसको गतकालका नीति र भूमिकाहरुको विस्तृत मूल्यांकन गर्नेपट्टि नलागेर त्यसले अहिले अपनाएका नीतिहरुको चर्चागर्नेसम्ममात्र हामी सीमित रहने छौं । त्यसले अपनाएका जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी नीतिहरु, भारतपरस्त नीति, मधेशवादीहरुसितको गठबन्धन, त्यसको पहलमा भएका कैयौं राष्ट्रघाती सन्धि वा नागरिकता सम्बन्धी सन्धि, देशलाई फिजी वा सिक्किम बनाउनका लागि त्यसले गरिरहेका प्रयत्नहरु, विभन्न गलत राजनीतिक तरिकाहरु अपनाएर भएपनि चुनाव जित्नका लागि त्यसले दिएको गोप्य निर्देशन आदि सबैको पृष्ठभूमिमा नै नेपाली जनताले एमाओवादी प्रति जुन प्रकारको मत प्रकट गरेका छन्, त्यो स्वागतयोग्य नै हो । त्यो अवस्थामा एमाओवादीले आफ्ना गल्तिहरुलाई सच्चाएर आफ्नो नीति र कार्यप्रणालीमा सुधार गर्नु नै सबैभन्दा सही र बुद्धिमताको कुरा हुन्थ्यो । तर त्यसको विपरित चुनावमा आफ्नो नराम्रो हार हुने स्थिति देखेकाले चुनावको मतगणनाको समेत बहिष्कार गर्ने त्यसले जुन निर्णय गरेको छ, त्यसलाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न । खास गरेर काठमाडौको क्षेत्र नं. १० मा प्रचण्डको पराजयको जुन स्थिति देखाप�यो, त्यसले गर्दा पनि उनी बढी उत्तेजित र नर्भस भएर अकस्मात त्यस प्रकारको निर्णय गरेको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
चुनावको सन्दर्भमा ने.क.पा. (मसाल)ले जारी गरेको अपीलमा यो स्पष्ट गरेको थियो कि एमाओवादी र जातिवादी तथा मधेशवादी समेतसितको त्यसको गठबन्धनले उनीहरुले दावी गरेजस्तो बहुमत वा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरेमा देशमा अधिनायकवादी शासन कायम हुने, जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बन्ने र राष्ट्रियता समेतमा ठूलो आँच पुग्ने खतरा रहने छ । त्यसैले हामीले जनतासित उनीहरुलाई त्यस प्रकारको बहुमत वा दुईतिहाई बहुमत आउन नदिनका लागि उच्च षतर्कता अपनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएका थियौं । अहिलेसम्म चुनावको जुन परिणाम अगाडि आएको छ, त्यसबाट जनताले उनीहरुलाई बहुमत वा दुईतिहाई बहुमतमा आउन नदिने कुरामाथि ध्यान दिएर नै मतदान गरेको कुरामा कुनै शंका रहन्न । जनताको त्यस प्रकारको अभिमतलाई हामीले सही मान्दछौं र स्वागत पनि गर्दछौं ।
एमाओवादीले देश, जनता र क्रान्तिका हितहरुभन्दा पनि आफ्ना दलिय स्वार्थ, अझ् स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने आफ्नो अध्यक्ष प्रचण्डको चरम प्रकारको व्यक्तिगत महत्वकांक्षा पूरा गर्नका लागि बारम्बार देश र जनताका हितहरुमा कुठाराघात हुने निर्णयहरु गर्दै गएका छन् । यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि आफ्ना जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी सोचाइहरु पूरा हुने नदेखेपछि संविधानको निर्माण नगरिकन पहिलो संविधानसभालाई विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनीहरुले कैयौंपल्ट आफ्नो नेतृत्व कायम नहुँदासम्म संविधान बन्न नदिने घोषणा समेत गरेका थिए । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिले आएर उनीहरुले आफ्नो पराजय हुने देखेपछि मतगणना समेतलाई बहिष्कार गरेर संविधानसभाको सम्पूर्ण चुनावलाई नै असफल बनाउने प्रयत्न गर्न थालेका छन् । यो अत्यन्त आपत्तिजनक र अप्रजातान्त्रिक कार्य हो । त्यसको परिणामस्वरुप देश गम्भीर प्रकारको संकटमा जाने वा कैयौं गम्भीर प्रकारका दुष्परिणामहरु हुने सम्भावनाई समेत अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसबारे गम्भीर हुनका लागि हामीले संविधानसभा, लोकतन्त्र र गणतन्त्र पक्षधर सबै राजनीतिक शक्तिहरु र जनता समेतसित अपील गर्दछौं ।
अन्तमा ने.क.पा. (मसाल)ले एमाओवादीसित उनीहरुले अहिले गरेको निर्णयबारे पुर्नविचार गर्न तथा देशलाई संकटको मुखमा धकेल्नेजस्तो कुनै कदम नउठाउनका लागि अनुरोध गर्दछौं । उनीहरुले त्यस प्रकारको कुनै कदम उठाए भने त्यसबाट सम्पूर्ण देश, जनता, २०६२�६३को आन्दोलनका उपलब्धिहरु, लोकतन्त्र र गणतन्त्र तथा स्वयं उनीहरुको संगठनलाई पनि गम्भीर क्षति पुग्ने छ । त्यसकारण अहिले उनीहरुले संविधानसभाको मतगणनाको बहिष्कार गर्ने जुन निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्, त्यसलाई फिर्ता लिनका लागि तथा संविधानसभाको चुनावको मतगणनालाई सुचारुरुपले अगाडि बढ्न दिएर त्यसको परिणामलाई स्वीकार गर्नका लागि उनीहरुसित पुनः अनुरोध गर्दछौं । अहिलेको मुख्य राष्ट्रिय आवश्यकताहरु संविधानसभाको चुनावलाई सफल पार्ने, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्ने र गणतन्त्रलाईलाई संस्थागत गर्ने नै हुन् । त्यसका लागि उनीहरुले अहिलेसम्म जुन सकारात्मक भूमिका खेल्दै आएका छन्, त्यसलाई निरन्तरता दिनु नै देश, जनता, गणतन्त्र र स्वयं उनीहरुको पनि हितमा हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास प्रकट गर्दछौं ।
मिति ः २०७० मंसिर ६ गते